CEO Apple Tim Cook ketara $ 198 nde na 2016, Ọ Bụ Ezi | Ọ BỤ
CEO Apple Tim Cook ketara $ 198 nde na 2016, Ọ bụ eziokwu
Ndị isi ndị isi nke Apple hụrụ na ụgwọ ha na-ada n'afọ gara aga mgbe Chief Executive Officer Tim Cook nwere ụgwọ ọrụ kasịnụ ọ na-akwụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ndekọ 2011 ya.
Ndị isi ala ise nke Cook nwetara ihe dịka $ US22.8 ($ 31) nke ọ bụla maka 2016, dị ka agbachitere intermediary gosiri na Friday. Ngwongwo ndị a na-akwụ ụgwọ gụnyere $ US2.8 na ụgwọ na ụgwọ ọrụ ego, na $ US20 na-enye onyinye.
Warren Buffett si Berkshire Hathaway kpughere ya etinyewo ihe karịrị ijeri dollar na Apple.
Ego $ US8.75 ($ 12) kwetara ụgwọ maka ego 2016, gụnyere ịkwụ ụgwọ $ US3 na $ US5.37 nde ego ụgwọ ọrụ, adịghị egosi 1.26 nde mbak nke sitere na nnukwu nsọpụrụ ọ nwetara na ntụgharị nke ntụgharị n'ime Apple's CEO .
Ha ruru ihe dị ka $ US136 ($ 186) mgbe ha debere - akwụkwọ kachasị mma Kuki nwetara n'afọ otu naanị site na nkwanye ùgwù. A naghị ewepụta atụmatụ nke mbak na ntinye ederede nke intermediary bụ ebe a na-akwụ ụgwọ ebe ọ bụ na ọ na-edekọ ihe ọhụụ ọhụrụ.
Uru bụ nnukwu ụgha site n'aka 2015 mgbe CEO nwetara $ US10 maka ịkwụ ụgwọ na ụgwọ ọrụ, na $ US64.2 na ngwaahịa site na nkwụnye ego 2011. Ihe ka ukwuu nke mbak maka ego 2016 adịghị edozi igbu ma tinyere ndị a adịghị na ihe ize ndụ nke ịkwụsị ọbụna dị ka Apple si kọọrọ ya ọnụ ahịa nke afọ mbụ kemgbe 2001.
Ụdị nke iPhone, Apple kasị ukwuu ego generator, adịghị enlivened mmemme meriri ụzọ tupu ụdị mere. Ndị na-emegiderịta onwe ha na China na-arụpụta ngwaọrụ ndị dị ntakịrị karịa ka ha na-eme ka mba dị iche iche nweta ebe nkwụsị.
Ụlọ ọrụ ahụ kwadoro Cook 1 nde na-ejigide akụ nke a ga-etinye na ntinye abụọ karịa afọ 10 mgbe ọ malitere ịchịkwa òtù na California na 2011.
Na 2013, nchịkọta nkwụnye ụgwọ jikọtara 33% nke mbak na mgbasa ozi mkpochapụ nke nzukọ ahụ na S & P 500 na mkpa nke Cook n'onwe ya, ma kpaa nkata iji kwụọ ụgwọ kwa afọ. Mgbe otu afọ gasịrị, nzukọ ahụ mere ka 7-for-1 ngwaahịa gbawara.
Apple CEO Tim Cook mere ihe dị ka $ 200 nde otu afọ gara aga n'agbanyeghị eziokwu na onye na-emepụta ihe nkiri iPhone kọrọ akụkọ mbụ ya kwa afọ ...
Apple CEO Tim Cook mere ihe dị ka $ 200 otu afọ gara aga n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na onye na-emepụta ihe ọmụma iPhone kọọrọ ya mmemme mbụ nke afọ ya kemgbe 2001. Foto: David Paul Morris
Cook nwetara ihe ọ bụla 280,000 kpere ejikọ ejikọtara maka 2016 ebe ọ bụ na Apple si ngwaahịa laghachi n'elu afọ atọ agwụchara August 24 nọ n'elu nke atọ n'etiti òtù dị na ndepụta. Ọ gbakwunyere na 980,000 mbak na-eme ka ọ nọrọ na-arụ ọrụ.
N'ịbụ ndị ejiri ego ndị gara aga jikọta ọnụ, Cook achọtawo ihe dị oké ọnụ ahịa karịa $ US350 ($ 479 nde) kemgbe ọ ghọrọ CEO.
Ọ na-agbakwunye na ọkara iji nweta ọkara nke mbak ndị a na-agbakwunye na nkwụghachi azụ na nkwụghachi ụgwọ iji kwụọ ụgwọ na August 2017 na 2018 ka ìhè nke ndị na-ewekọrịta afọ atọ na-alaghachi, dịka maka ozi gbasara Bloomberg.
Ihe 2016 na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe n'afọ bụ afọ azụ ahịa gụnyere ntinye 12 maka penny ọ bụla, na-eti ọkara nke òtù S & P 500.
A na-enye ndị agadi VPs Angela Ahrendts, Eddy Cue, Luca Maestri, Dan Riccio na Bruce Sewell n'ụzọ zuru ezu na ngwaahịa Apple na-agbanyeghachi azụ karịa afọ atọ. Ihe ndị ọzọ dị n'ime afọ anọ na ọkara ka e kwechara ha. A na-akwụ ụgwọ ego a na-akwụ ụgwọ n'okpuru nlekọta dịka nzukọ ahụ na-atụfu nza net na nyocha ọrụ ụgwọ ọrụ.
Onye na-anụ ọkụ n'obi site na ngosipụta mmezi nke Apple bụ Onye Ọrụ Nchịkwa Ukwu Jony Ive, nke ụfọdụ ndị nnọchianya kachasị mkpa nke òtù ahụ kpọrọ. Ive depụtara a otutu otutu nke Apple kasị ama ihe gụnyere iMac, iPod na iPhone.
Ndị ọrụ Apple anaghị emeghachi omume ngwa ngwa maka oku na ozi-e zitere na azụ ahịa azụ ahịa.
4 Ọzụzụ Mmụta Na - enweghị Atụ na Microsoft